कुन देशमा कति बजे छ दशैंको टीकाको साइत ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुन देशमा कति बजे छ दशैंको टीकाको साइत ?
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नेपाल र अन्य देशमा यो वर्षको टिकाको साइत निकालेको छ । नेपाल बाहिरको लागि पनि दशैंको टीका लगाउने उत्तम साइत निकालेको हो ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले २४ वटा देशमा टीका लगाउने सही समय तय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा।डा। माधवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । नेपाल वाहेक अन्य मुलुकमा पनि नेपाली हिन्दुहरुको बसोबास रहेकाले अन्य मुलुकमा पनि टिकाको लागि उत्तम साइत जुराउने गरिएको छ ।
समितिले नेपालमा कात्तिक १० गते अर्थात अक्टोर २६ का दिन बिहान १० बजेर १९ मिनेटमा टीकाको उत्तम साइत रहेको जनाएको छ । यस्तै भारतमा अक्टोबर २६ कै दिन बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा टीका लगाउने साइत तय गरिएको छ भने अमेरिकाको न्यूयोर्कमा अक्टोबर २५ को ११ बजेर ५ मिनेटमा टीका लगाउने सायत जुराइएको छ ।
कोरोना संक्र’ मणबाट दाङमा एक महिलाको मृ ’ त्यु, कोरोनाबाट मृ ’ त्यु हुनेको संख्या २७ पुग्यो
‘रबि हिरो बनेर आए, अब इमरान खान बन्नुपर्छ’ – डा. सुरेन्द्र केसी